Share icon need or not - MYSTERY ZILLION
Share icon need or not
facebook share icon , twitter retweet icon တွေ website တွေမှာထည့်သင့်သလား။ ထည့်ဖို့ကော တကယ်လိုအပ်လား။
အဲဒါတွေ က web site ကို ပိုကြည့်ကောင်းစေတယ် လို့ ထင်တယ်
လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်အရ ဆိုက် ဆယ်ခုမှာ ရှစ်ခုလောက်က hit counter , flag counter ထည့်တယ်
နောက် ဆယ်ခုမှာ ငါးခုလောက်က weather report , calender ထည့်ချင်ကြပါတယ်
နောက် အဲဒီ social icon လေးတွေ ကိုတော့ fb ကို သုံးကြတဲ့ customer တိုင်း သုံးကြပါတယ် . ထည့်လဲထည့်ချင်ကြပါတယ်
အဲဒီတော့ သူတို့ အတွက် ဆိုရင် လိုအပ်တယ်လို့ ပြောလို့ ရတယ်
အရိုးသားဆုံး ပြောရရင် . အဲဒါတွေကို ဆိုက်တွေ မှာ မြင်ရတိုင်း တခါ မှ မနှိပ်ဘူးပါဘူး . နောက် RSS feed တွေကို လဲ တစ်ခါမှ feed မယူဘူးပါဘူး .
twitter ကို ဘန်းထားတော့ ကျော်ရမှာ ပျင်းလို့ အသုံးဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပါပြီ .
fb ကလဲ photo ကြွားတဲ့ သက်သက် အတွက်ပဲ သုံးဖြစ်ပါတယ် . သူများတွေ က စလုံးတို့ သြဇီ တို့ က ပုံတွေ တင်နေချိန်မှာ ကိုယ်က တညင်တံတားပေါ်က ပုံနဲ့ ဒလဆိပ်ကမ်း က လက်ပြနေတဲ့ ပုံတွေ ပဲ တင်နိုင်လို့
အခု ဆို fb လဲမသုံးဖြစ်တာကြာပြီ ဟီးဟီး
ကျွန်တော့ အတွက် ပြောရရင် တော့ လုံး၀ကို မလိုအပ်ပါ ခင်ဗျာ
လိုပါတယ်။ အများစုက facebook သုံးကြတာများပါတယ်။ facebook သုံးနေတုံး share ထားတာ like ထားတာလေးတွေ ့ရင် ၀င်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို ့သော် social bookmarking ဆိုဒ်တွေကတော့မသုံးဖြစ်ပါ။